🥇How to Buy TRON Online December 2021 | Full Learn2Trade Guide!
TRON ၂၀၂၁ ကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်:2နိုဝင်ဘာလ 2021
TRON သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လူသိအများဆုံး blockchains များထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ CEO Justin Sun ကြောင့်သာမဟုတ်ပါ။ ဤ cryptocurrency တွင်ထူးခြားသောနည်းပညာဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးစက္ကန့်တိုင်းတွင်အရောင်းအ ၀ ယ် ၂၀၀၀ ပြုလုပ်နိုင်သည်။
သင်သင်ယူလိုစိတ်ပြင်းပြလျှင် TRON ကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲ - ငါတို့သည်ဤလမ်းညွှန်၌ရှိသမျှကိုဖုံးလွှမ်း။
ဒီနေ့ငါတို့မင်းဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောမှာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အာကာသရှိထိပ်တန်းလိုင်စင်ရပွဲစားများ၏ပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်အိမ်မှ TRON ကို ၀ ယ်ပါ။ သိုလှောင်မှုဆိုင်ရာရွေးချယ်စရာများ၊ အသုံးများသောနည်းဗျူဟာများနှင့် Tron ကိုစျေးသက်သာစွာဖြင့် ၀ ယ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းသည်။
၁၀ မိနစ်အတွင်း TRON မည်သို့ ၀ ယ်ရမည်နည်း။ Quickfire လမ်းညွှန်
အခုဒီစာအုပ်တစ်ခုလုံးကိုဖတ်ဖို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မဟုတ်ရင် ၁၀ မိနစ်အတွင်း TRON ကိုဘယ်လို ၀ ယ်ရမလဲဆိုတဲ့အတိုချုပ်ရှင်းလင်းချက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
အဆင့် 1: ယုံကြည်ထိုက်သူနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ပါ cryptocurrency ပွဲစား - Capital.com သည်ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီပြီး TRON ကို ၀% ကော်မရှင်ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်
အဆင့် 2: Capital.com ကဲ့သို့စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပွဲစားများသည် KYC စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏နာမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်များကိုရိုက်ထည့်ပါ။
အဆင့် 3: မင်းရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုဖို့မင်းရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ မင်းရဲ့လိပ်စာကိုအတည်ပြုဖို့ဘဏ်ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၊
အဆင့် 4: သင်၏အကောင့်သို့ငွေသွင်းပါ။ Capital.com သည်ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကဒ်၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ PayPal နှင့်အခြားများစွာသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများကိုပံ့ပိုးပေးသည်။
အဆင့် 5: TRON ကို ၀ ယ်ရန်အော်ဒါတင်ပါ၊ သင် Search bar ကို သုံး၍ Capital.com တွင်လွယ်ကူစွာတွေ့နိုင်သည်
ထူးခြားသည်မှာ Capital.com သည် TRON ၌အနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သင်မည်သည့်ပလက်ဖောင်းအမျိုးအစားကိုသုံးမည်ကိုမဆုံးဖြတ်ရသေးပါက Capital.com နှင့်ကော်မရှင်မပါသော CFD ပလက်ဖောင်း Capital.com ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုနောက်တစ်ခုတွင်သင်တွေ့လိမ့်မည်။
ယုံကြည်ရသော TRON ပွဲစားကိုရွေးပါ
အွန်လိုင်းပွဲစားများနှင့်အတူဂျုံဖျင်းကိုခွဲရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် TRON ကိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိစေရန်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုကိုလိုင်စင်များနှင့်အခကြေးငွေနည်းပါးစွာဖြင့် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်ရှာဖွေသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်နှစ်ခုလုံးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အယုံကြည်ရဆုံးပွဲစားပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် CFD ကုန်သွယ်.
1. Capital.com - လူသစ်များအတွက်အကောင်းဆုံး CFD ပွဲစား - ဒေါ်လာ ၂၀ မှ TRON သို့ငွေသွင်းပါ
အထက်ဖော်ပြပါ ပွဲစားကဲ့သို့ပင် Capital.com သည် ကုန်သည်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည်။ FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့သည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ထိန်းကျောင်းမှုများ၊ ဤနေရာကို လိုင်စင်နှင့် စောင့်ကြည့်နေသောကြောင့် သင်သည် အနားယူနိုင်သည် - ၎င်းသည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သောကြောင့် သင်အနားယူနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ပလပ်ဖောင်းသည် CFDs များကို အသုံးပြုခွင့်ပေးသောကြောင့် TRON ကို ဤနေရာတွင် လုံးလုံးလျားလျား မ၀ယ်နိုင်ပါ။ မသိသေးသူများအတွက်၊ ဤအရာများသည် စျေးနှုန်းအပြောင်းအရွှေ့မှ သင့်အား ကုန်သွယ်မှုနှင့် အမြတ်အစွန်းများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ခေတ်မီသော ငွေကြေးကိရိယာများဖြစ်သည်။
အမှောင်ထဲရှိသူများအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ leveraged CFD များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ Capital.com သည်ကော်မရှင်အခမဲ့ CFD ပွဲစားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်တစ်ဖန်သင်ပေးဆောင်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောကုန်သွယ်ကြေးမှာပျံ့နှံ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်သည်တကယ့်ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော TRX/USD (TRON/USD) တွင် ၁.၂၉% ဝန်းကျင်ပြန့်နှံ့ခဲ့သည်။ မင်းကအခြားဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနဲ့တွဲချင်ရင် TRX/BTC (TRON/Bitcoin) ကိုပျမ်းမျှ ၁.၉၂%နဲ့ဖြန့်နိုင်ပါတယ်။
Capital.com တွင် CFD များကဲ့သို့စျေးကွက် ၃၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် TRON အတွက်ရှယ်ယာများ၊ forex၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်အခြား crypto-alternative များပါ ၀ င်သည်။ သင်သည်သင်၏အစုစုတွင်မတူကွဲပြားမှုအချို့ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည့်အခါပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်တစ်ခုထက်ပိုပြီးရယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဆင့်မြင့်နှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သောအင်္ဂါရပ်များစွာကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဤလမ်းညွှန်တွင်နည်းပညာအချက်အလက် ၇၀၊ စျေးအချက်ပေးအချက်များ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သောဖောက်သည်တို့၏စိတ်သဘောထားအကြံဥာဏ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဤ CFD ပလက်ဖောင်းသည်အခမဲ့ပညာပေးဗွီဒီယိုများ၊ webinars များနှင့်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတို့အပါအ ၀ င်ကုန်သည်သစ်များအတွက်ရည်ရွယ်သော tool များစွာကိုပေးသည်။ မင်းရေငုပ်မသွားခင်နည်းဗျူဟာအနည်းငယ်ကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် virtual သရုပ်ပြရန်ပုံငွေထဲမှာဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နဲ့အခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်ကိုစာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ 'အစစ်အမှန်' အကောင့်ကိုရန်ပုံငွေအတွက်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ debit/credit card များနှင့် Apple Pay ကဲ့သို့ e-wallets ကဲ့သို့ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားများမှသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀ သွင်းရန်နှင့်ကော်မရှင်မပါသော TRON CFDs
CySEC၊ FCA၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ စည်းမျဉ်း
TRON သို့မဟုတ်ကုန်သွယ်မှု CFD များ ၀ ယ်ပါ
သင်သတိမပြုမိပါက TRON ကိုသင် ၀ င်ရောက်နိုင်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး ၎င်းတွင် - သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင်သည် ကုန်သွယ် CFD များ အဆုံးစွန်သောအရာသည်သင်ပိုင်ဆိုင်ရန် (သို့) အရင်းခံရန်မလိုပါ။
လာမည့် cryptocurrencies ကိုသုံးရန်ရေရှည်နှင့်ရေတိုနည်းလမ်းနှစ်ခုလုံးတွင်မင်းလွင်ကိုရှင်းလင်းသည်။
TRON ကိုဝယ်။ ကိုင်ထားပါ
သင်ကရန်ပုံငွေများကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ရေရှည်တွင်အကျိုးအမြတ်ပိုရတတ်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အဖြစ်မင်းမြင်သလား။ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ခြင်းနည်းဗျူဟာသည်သင်နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
၎င်းသည်သင် TRON ၀ ယ်ခြင်းနှင့်သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအမြတ်တစ်ခုရရန်သင့်တော်သည်ဟုခံစားရသည်အထိငွေမထုတ်ပါ။ တခါတရံ၊ ဒါကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်တယ်။
အချို့ကိုရှင်းလင်းစေရန်၊ TRON နှင့် ၀ ယ်ယူနည်းဗျူဟာကိုမည်သို့ချမှတ်နိုင်ပုံဥပမာကိုကြည့်ပါ။
TRON ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်၎င်းသည်စျေးနှုန်းတစ်ခုရှိသည်ကိုသင်သတိပြုမိသည် လြော့ပေါ့စေ ၇၅%
မင်းကဒါယာယီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မင်းထင်တဲ့အတိုင်းမင်းဒေါ်လာ ၆၀၀ ဖန်တီးတယ် ဝယ်ခြင်း အမိန့်
၁၀ လအကြာတွင် TRON သည် ၂၄% စျေး ၀ င်သည် တိုးမြှင့်လာသည် - မင်းကသူ့ရဲ့ ဦး တည်ချက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ခန့်မှန်းခဲ့တယ်
သင်နေရာချသည် ရောင်းချ ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကနေမင်းရဲ့ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးအမြတ်ကိုထုတ်ယူနိုင်ဖို့
သင်ကန ဦး ဒေါ်လာ ၆၀၀ (ဒေါ်လာ ၆၀၀ x ၂၄%) မှ ၁၄၄ ဒေါ်လာအမြတ်ရခဲ့သည်။
ဒါကအတိုချုပ်ပြောရရင် ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကိုင်ခြင်းနည်းဗျူဟာဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်သင်ကြိုးစားချင်သောအရာတစ်ခုကဲ့သို့အသံထွက်လျှင်သင်၏ TRON ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသင်မည်သည့်နေရာတွင်သိုလှောင်ရမည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများသည်သင်အွန်လိုင်းတွင်များစွာသော cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကိုသတိပြုမိသည်။ သေချာတာပေါ့၊ မင်း TRX ဒင်္ဂါးပြားတွေကိုဒီလိုမျိုးအာကာသထဲမှာသိုလှောင်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းစည်းမျဉ်းမရှိရင်အဲဒါကိုမင်းသေချာပေါက်လုပ်လိမ့်မယ်။
သင်၏ TRON ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုသိုလှောင်ရန်လဲလှယ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှာပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သော့များထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မင်းအား 'cryptojacking' ကိုမယုံနိုင်လောက်အောင်အားနည်းချက်ဖြစ်စေသည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၊ ဤအရာသည်ဒေတာများကို အသုံးချ၍ လဲလှယ်ရယူနိုင်ရန်ဟက်ကာများလုပ်ဆောင်သည့်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်ဒေါ်လာဘီလျံနှင့်ချီ။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများခိုးယူခြင်းမခံရပါ။
သင်၏ TRON ၀ ယ်ယူသိုလှောင်ရန်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအဖြေတစ်ခုမှာ crypto-wallet ကို download လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဟက်ကာဖြစ်ခြင်း၊ သင်၏လျှို့ဝှက်သော့ချက်ဆုံးရှုံးခြင်း၊ မေ့ပျောက်ခြင်း၊ နည်းပညာပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်လိမ်လည်ခြင်းကဲ့သို့ဤနည်းလမ်းဖြင့်အရာများစွာသည်မှားယွင်းသွားနိုင်သည်။ ၎င်းအားလုံလုံခြုံခြုံထားရှိခြင်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေးဆော့ဝဲများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်း၊ အရန်ပိုက်ဆံအိတ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့်လျှို့ဝှက်စကားဝှက် (အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်တစ်ခု) ကိုသုံးပြီးစာဝှက်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုသည်။
ပိုမိုလွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအဖွဲ့များဖြစ်သော CySEC, FCA, ASIC နှင့် FINRA အောက်ရှိ TRT ကို ၀ ယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မင်းအားကော်မရှင်ကြေးများဘာမှမပေးဘဲ TRON ကို ၀ ယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတို့ကိုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်သင် TRX ဒင်္ဂါးပြားများကို ၂၅ ဒေါ်လာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
မင်းကိုယ်မင်းလက်တွေ့ကျကျချဉ်းကပ်နေတာကိုကြည့်ပြီး crypto စျေးကွက်တွေကိုပုံမှန်ကြည့်ပေမယ့်ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုမြင်နေသလား။ CFD များသည်သင့်အတွက်လက်နက်ဖြစ်နိုင်သည်။ CFDs (ကွာခြားချက်များအတွက်စာချုပ်များ) ဥပမာငွေချေးစာချုပ်များကဲ့သို့ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ငွေရှာရန် ပို၍ စွယ်စုံရနည်းလမ်းတစ်ခုကိုပေးသည်။
စတော့ရှယ်ယာများနှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သည့်အခါသင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးမြင့်တက်ခြင်းမှသာအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ CFDs များသည်သင့်အား ဦး တည်ရာဖြစ်စေ၊ အတိုဖြစ်စေကုန်သွယ်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်သင်သည် TRON ကိုဒေါ်လာနှင့်ဗြိတိသျှပေါင်ကဲ့သို့ငွေကြေးနှင့် Bitcoin ကဲ့သို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်လိမ့်မည်။
CFD များရောင်းဝယ်သည့်အခါသိုလှောင်မှုအကြောင်းသင်တွေးရန်မလိုအပ်ပါ။ ဤအရာသည်သင်အရင်းခံ cryptocurrency ကိုရောင်းဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား၊ မင်းကသူ့ရဲ့အနာဂတ်တန်ဖိုးကိုအခြေခံပြီးအရောင်းအဝယ်လုပ်လိမ့်မယ်။
ဥပမာတစ်ခုနဲ့ TRON CFDs ရောင်းဝယ်ခြင်းရဲ့အနုပညာကိုနည်းနည်းပိုပြီးအလင်းပြကြပါစို့။
သုတေသနအချို့လုပ်ပြီးနောက် TRON ကိုဒေါ်လာနှင့်လဲလှယ်လိုသည်
ဒေါ်လာ ၀.၁၁ ဖြင့် TRX/USD သည်သင်ထင်သည် အလွန်အကျွံ နှင့်လိမ့်မည် ကျ နောက်တဖန်
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပေးပါ ရောင်းချ တိုတိုသွားပါ
နေ့မကုန်မီ TRX/USD ရှိသည် လဲ ဒေါ်လာ ၀.၀၉ သို့သင်၏ခန့်မှန်းချက်သည်မှန်သည်
TRX/USD သည် ၂၀% ကျဆင်းခဲ့သည် ဝယ်ခြင်း ငွေထုတ်ရန်အမိန့်
မင်းရဲ့ရာထူးကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့မင်းကမူလဒေါ်လာ ၃၀၀ ရောင်းအမိန့်ကနေဒေါ်လာ ၆၀ အမြတ်ရခဲ့တယ်
သူတို့၏မွေးရာပါမတည်ငြိမ်မှုကြောင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်များသည်အံ့အားသင့်စရာများမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် CFD များသည် TRON (သို့) အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမဆိုရောင်းဝယ်ရန်အပြောင်းလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ရှည်လျားမည့်အစားတိုသွားခြင်းအားဖြင့် cryptocurrency ၏ကျဆင်းလာသောတန်ဖိုးမှအကျိုးအမြတ်ကိုသင်ရနိုင်သည်။
CFD များသည်အားသာချက်ရှိသောကိရိယာများဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်း သင်ရွေးချယ်ထားသောများပြားသောအားဖြင့်သင်၏ရာထူးကိုမြှင့်တင်လိမ့်မည်။ သင်ရွေးထားသောပွဲစားတွင်သြဇာကိုသင်မြင်သောအခါ၎င်းကိုအမျိုးစုံ (သို့) အချိုးတစ်ခုအဖြစ်ပြလိမ့်မည်။ cryptocurrency CFD များအတွက်အသုံးအများဆုံးသြဇာသည် ၁: ၂ (သို့မဟုတ် ၂ ဆ) ဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ leverage ကိုအသုံးချခဲ့ရင်စောစောက TRX/USD ကုန်သွယ်ရေးကဘယ်လိုကစားမလဲကြည့်ရအောင်။
နင်တို့ TRX/USD ကိုဒေါ်လာ ၃၀၀ နဲ့ရောင်းဖို့အော်ဒါတင်လိုက်တယ်
1:2သြဇာသုံးရန်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ယခုမှာယူမှုသည်ဒေါ်လာ ၆၀၀ တန်သည်
စျေးကွက်ကိုမှန်ကန်စွာခန့်မှန်းရန်သင်လုပ်သော ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းအမြတ်သည်ဒေါ်လာ ၆၀ မှဒေါ်လာ ၁၂၀ အထိနှစ်ဆတိုးသွားသည်။
သင် TRON CFDs ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားပါကတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အချို့သည် cryptocurrency ဆင်းသက်လာမှုများကိုလုံး ၀ ပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းသတိပြုပါ။ ၎င်းတွင်အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့်ဟောင်ကောင်တို့ပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်သင်နှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိကို ဦး စွာစစ်ဆေးသင့်သည်။
TRON ကိုဘယ်မှာ ၀ ယ်ရမလဲ
TRON ကိုမည်သို့ ၀ ယ်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကအချက်များစွာကိုကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးပြီးပြီ။ ကဲစလိုက်ကြရအောင် ဘယ်မှာ ဤဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကို ၀ ယ်ရန်
TRON Debit Card ၀ ယ်ပါ
သင်၏ဒက်ဘစ်ကဒ်ကို သုံး၍ TRON ၀ ယ်ရန်ရှာဖွေရာတွင်သတိပြုရမည့်ပထမအချက်မှာသင်ငွေလွှဲခများပေးချေရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ငွေပေးချေမှုပုံစံကို Coinbase တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဤပလက်ဖောင်းသည်မှာယူမှုပမာဏ၏ ၃.၉၉% ကိုသင်ကောက်ခံလိမ့်မည်။
ကော်မရှင်မပါသောပွဲစား eToro သည် TRON ၀ ယ်ရန် debit card ကိုသုံးလျှင် ၀.၅% သာကျသင့်လိမ့်မည်။ သင်အမေရိကန်ဒေါ်လာသုံးလျှင်ဤအခကြေးငွေကိုကင်းလွတ်လိမ့်မည်။
TRON Credit Card ၀ ယ်ပါ
သင်သည် credit card အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သူတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ဖိတ်ထားသောငွေကြိုကြေးများအကြောင်းသင်သိပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သင်စိတ်ထဲရှိသော်လည်း၊ နိုင် အကြွေး ၀ ယ်ကတ် သုံး၍ TRON ကို ၀ ယ်ပါ၊ အချို့ပံ့ပိုးသူများနှင့်ပွဲစားများသည်အပိုကော်မရှင်ကြေးများပေးကြောင်းသတိပြုပါ။
eToro သည်ခရက်ဒစ်ကဒ်အပ်ငွေများကိုလက်ခံပြီးသင့်အားမည်သည့်ကော်မရှင်မှမယူပါ။ တစ်နည်းအားဖြင့် USD မှလွဲ၍ အခြားငွေကြေးတစ်ခုကိုသင် ၀.၅% သာပေးချေရလိမ့်မည်။
TRON Paypal ကို ၀ ယ်ပါ
ဤလမ်းညွှန်သည်အွန်လိုင်း cryptocurrency ပွဲစားများ၏ခြင်္သေ့၏ဝေစုကို PayPal လက်မခံပါ။ မင်းရဲ့နောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက်ဒီ e-wallet ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်မင်း eToro မှာလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကန်အပ်ငွေများထက်အခြားငွေကြေးဖြင့်ပေးချေပါကအထက်ဖော်ပြပါ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်းငွေလဲလှယ်နှုန်းတွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကုန်သွယ်သူ/ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူစည်းကမ်းများ (သို့) နည်းဗျူဟာများကိုဆယ်စုနှစ်များစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့မတည်ငြိမ်သောစျေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အစီအစဉ်မရှိခြင်းသည်ဘေးအန္တရာယ်အတွက်စာရွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီးလိုက်နာရန်စည်းမျဉ်းအချို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပါ။
မင်းရဲ့ TRON ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီနိုင်မယ့်အရာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမင်းမှာအကြံဥာဏ်အချို့လိုအပ်ရင်အောက်မှာကြည့်ပါ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးစျေးကွက်ကိုအချိန်မီဖိစီးမှုကိုရှောင်ရှားနိုင်တဲ့အခြေခံအကျဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်ဒေါ်လာဈေးပျမ်းမျှနည်းဗျူဟာကိုသုံးပြီး TRON ကို ၀ ယ်ဖို့ပါပဲ။
မင်းဒီပုံကိုဘယ်လိုကြည့်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုပေးပါ။ ပြက္ခဒိန်လတွင်သင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ တန် TRON ၀ ယ်လိုကြောင်းစိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဒီဗျူဟာကမင်းအဲဒီပမာဏကိုသေးငယ်တဲ့အပိုင်းတွေခွဲပြီး TRX အကြွေစေ့တွေကိုတစ်လလုံးအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ၀ ယ်တာကိုမြင်လိမ့်မယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်တစ်ပတ်လျှင် ၁၂၅ ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်ကိုမြင်နိုင်သည်။
eToro သည်သင်အားမည်သည့်ကော်မရှင်မှမယူဘဲ TRON တွင် ၂၅ ဒေါ်လာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သဖြင့်ဤမဟာဗျူဟာကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အလွန်လွယ်ကူစေသည်။
TRON ကိုမည်သို့ ၀ ယ်သည်ကိုသုတေသနလုပ်သောအခါ 'dip ကိုဝယ်ပါ' ဟူသောဝေါဟာရကိုသင်ဖတ်ဖူးပေမည်။ cryptocurrency စျေးကွက်များသည်နာမည်ဆိုးနှင့်ကျော်ကြားသောအပြောင်းအလဲရှိသည်။ အသစ်များအတွက်၊ ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးများသည်ရေတိုစျေးနှုန်းအတက်အကျကို ဦး တည်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဤမဟာဗျူဟာကိုထိုအတက်အကျများကိုအခွင့်ကောင်းယူရန်အသုံးပြုသည်။
TRON တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ dip ကိုသင်မည်သို့ ၀ ယ်နိုင်သည်ကိုဥပမာတစ်ခုကြည့်ပါ။
TRON သည်သိသိသာသာစျေး ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားသည်ကိုဆိုကြပါစို့။
သင်နေရာချသည် ဝယ်ခြင်း TRON ကိုမတန်တဆတောင်းခံနေစဉ်အော်ဒါ
ဒယ်အိုးကိုသင်ဤနည်းဖြင့် ၀ ယ်သည်
ရည်ရွယ်ချက်မှာ TRON သည်နောက်ဆုံးပြန်လည်သက်သာလာလျှင်၎င်းကိုစျေးနှုန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ၀ ယ်ရန်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၊ သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောဒေါ်လာကုန်ကျစရိတ်ပျမ်းမျှနည်းဗျူဟာနှင့် တွဲ၍ ၀ ယ်ခြင်းကိုအလွယ်တကူသုံးနိုင်သည်။
သင်ယခု TRON ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည်ကိုလေ့လာခြင်းကိုအာရုံစိုက်ချင်ပေမဲ့၎င်းကိုမျိုးစုံလုပ်ရန်ပညာရှိစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ရွှေ (သို့) ရွှေကဲ့သို့သောကုန်စည်အချို့ကိုထည့်လျှင် ဆီ TRON မအောင်မြင်လျှင်သင်၌အခြားစျေးကွက်များပြန်လည်ကျဆင်းလာနိုင်သည်။ အခြားနည်းလမ်းများတွင်အညွှန်းများနှင့်ရှယ်ယာများပါဝင်သည်။
စျေးနှုန်းသမိုင်းကြောင်းနှင့်လက်ရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏စိတ်နေသဘောထားကိုနားလည်ရန်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကိုတစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ထိမိခဲ့သည်။ ဒါတင်မကဘဲအမြတ်အစွန်းအခွင့်အလမ်းတွေကိုပါရှာတွေ့ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဤကျွမ်းကျင်မှုသည်ကျွမ်းကျင်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်လူများစွာသည်အဘယ်ကြောင့်နည်း crypto အချက်ပြမှုများမရ။ ၎င်းသည် TRON ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သုတေသနလုပ်ခြင်းဖြင့်သက်သာစေသည်။ အဲဒီအစားကျွမ်းကျင်တဲ့စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေါ်မူတည်ပြီးအချက်ပြတွေပို့လိမ့်မယ်။ Learn2Trade မှာငါတို့ကငါတို့ဆီကိုနှံ့စပ်တဲ့အချက်အလတ်တွေပို့တယ် ကြေးနန်းအုပ်စု - နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနာရီများပေါ်တွင်မူတည်သည်။
Crypto အချက်ပြရွေးချယ်မှု ၃ ခုပါဝင်သည် အခမဲ့ တစ်ပတ်လျှင်အချက်ပြများ (သို့) တစ်နေ့လျှင်အချက် ၃-၅ အချက် (တစ်ပတ်လျှင် ၅ ရက်) ကမ်းလှမ်းသောပရီမီယံအကောင့် မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့သည် crypto pair၊ ရှည် (သို့) တို၊ အကန့်အသတ်၊ အကျိုးအမြတ်နှင့်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးများကဲ့သို့အမှာစာများကိုအမြဲထည့်သွင်းသည်။ ထို့ပြင်ပရီမီယံအကောင့်တွင်ရက် ၃၀ ငွေပြန်အမ်းအာမခံပါ ၀ င်သည်။
TRON အွန်လိုင်း ၀ ယ်ယူနည်း
cryptocurrency မြင်ကွင်းတွင်ဆန်းသစ်သောသူများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကော်မရှင်-အခမဲ့ပွဲစား Capital.com မှတဆင့် TRON ကိုမည်သို့ ၀ ယ်ရမည့်နည်းလမ်း ၄ ဆင့်ကိုထည့်သွင်းထားသည်။
အဆင့် ၁: TRON ပွဲစားနှင့်မှတ်ပုံတင်ပါ
Capital.com ပလက်ဖောင်းကိုရောက်ပြီဆိုရင် 'Join Now' ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဤကိုနှိပ်ပါ၊ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုဖတ်။ အခြေခံအချက်အလက်အချို့ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ဘယ်သူမှခန့်မှန်းလို့မရတဲ့အမှတ်တရစကားဝှက်တစ်ခုစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ သင်ပျော်ရွှင်သောအခါဘောလုံးကိုလှိမ့ ်၍ TRON ကို ၀ ယ်ရန် 'အကောင့်ဖန်တီးပါ' ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏အီးမေးလ်ကိုစစ်ပြီးသင်၏ Capital.com အကောင့်ကိုပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန် link ကိုနှိပ်ပါ။ ဤသည်စည်းမျဉ်းနှင့်အညီဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့သည် KYC ကိုစောစောကပြောခဲ့သည်။ သင်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး အနေနှင့်၊ ဤပွဲစားသည်သင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းသင်အတည်ပြုရမည်ကိုဆိုလိုသည်။
ဤအတွက်သင်သည်ရှင်းလင်းသောဓာတ်ပုံ (သို့) သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (သို့) အစိုးရထုတ်ပေးသော ID ကိုစကင်ဖတ်နိုင်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုကိုကာကွယ်ရန်သင်၏အမည်နှင့်လိပ်စာပါ ၀ င်သောနောက်ဆုံးဘဏ်ကြေညာချက် (သို့မဟုတ်အသုံး ၀ င်ငွေတောင်းခံလွှာ) ကိုလွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်းရက်စွဲဖြင့်တင်ပြရမည်။
TRON ၀ ယ်ရန်သင်၏အကောင့်သို့ငွေအနည်းငယ်သွင်းရန် Capital.com ရှိပင်မစာမျက်နှာ၌ 'ငွေသွင်းငွေများ' ကိုနှိပ်ပါ။ လက်ခံထားသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများတွင်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်း၊ PayPal၊ Skrill၊ Neteller၊ Mastercard၊ Visa နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
သင်ထည့်သွင်းလိုသောငွေပမာဏကိုထည့်။ အတည်ပြုခြင်းမပြုမီသတင်းအချက်အလက်ကိုစစ်ဆေးပါ။ Capital.com သည်သင် TRON ကိုမနှောင့်နှေးဘဲ ၀ ယ်နိုင်စေရန်သင်၏အကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများကိုချက်ချင်းထည့်ပေးလိမ့်မည်။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်သည်ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ဤသို့ပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကငွေများရောက်ရှိလာရန်သင်ရက်အနည်းငယ်စောင့်ရပေမည်။
အဆင့် ၄: TRON ကို ၀ ယ်ပါ
Capital.com တွင် TRON ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ပိုမိုလွယ်ကူနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ၎င်းကိုပင်မစာမျက်နှာရှိ search bar တွင်ရိုက်ထည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် 'Trade Markets' ကိုနှိပ်ပါ၊ 'Crypto' အောက်ရှိအမှတ်အသားကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။
မင်းက TRON မှာအနည်းဆုံး ၂၅ ဒေါ်လာကနေ Capital.com မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်တယ်၊ ကော်မရှင်အတွက်တစ်ရာခိုင်နှုန်းမပေးရဘဲ၊ အရေးကြီးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း cryptocurrency စျေးကွက်များသည်ဆိုးရွားသောစျေးနှုန်းများနှင့်တွေ့ကြုံရသည် - ထို့ကြောင့်အစီအစဉ်ရှိရန်အရေးကြီးသည်။ TRON ကိုအွန်လိုင်းမှမည်သို့ ၀ ယ်ယူရမည်ကိုလေ့လာသည့်အခါသင်ထိန်းညှိထားသောပွဲစားကိုသာယုံကြည်ရန်အရေးကြီးသည်။
ဤလမ်းညွှန်သည် Capital.com ကိုအကောင်းဆုံးလုံး ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ အစုစုကွဲပြားမှုများနှင့်ဒေါ်လာကုန်ကျစရိတ်ပျမ်းမျှခြင်းကဲ့သို့ဤပလက်ဖောင်းတွင်အမျိုးမျိုးသောနည်းဗျူဟာများကိုသင်ချမှတ်နိုင်သည်။
ပွဲစားသည် FCA၊ ASIC၊ CySEC၊ နှင့် NBRB အောက်တွင် လည်ပတ်နေပြီး၊ သင်သည် မတူကွဲပြားသော စျေးကွက်များကို သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ မလုံလောက်ပါက ကော်မရှင်ခမပေးဘဲ အနည်းဆုံး $25 မှ TRON တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။ သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို သိမ်းဆည်းရာတွင် အပိုကုန်ကျစရိတ်မရှိဘဲ Capital.com တွင် လုံခြုံစွာသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။
သင် TRON ၏အနည်းဆုံးပမာဏကိုသင် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ကော်မရှင်-အခမဲ့ပွဲစား eToro သည် TRON တွင် ၂၅ ဒေါ်လာသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုကူညီလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာကုန်ကျစရိတ်ပျမ်းမျှနည်းဗျူဟာနှင့်အလွန်လိုက်ဖက်သည်။
၅ နှစ်အတွင်း TRON တန်ဖိုးမည်မျှဖြစ်နိုင်သနည်း။
၅ နှစ်အတွင်း TRON ဖြစ်မည့်နေရာခန့်မှန်းစျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်များသည်ဒေါ်လာ ၀.၇၆ ဖြစ်သည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို လေ့လာ၍ နောက်ဆုံး crypto သတင်းနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သောစျေးကွက်များကိုသင်ကြည့်နိုင်သည်။
TRON ၀ ယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာကဘယ်မှာလဲ။
စည်းမျဉ်း၊ ၀ င်ကြေးနည်းခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်များစသည့်အရေးကြီးသောအချက်များကိုသုတေသနလုပ်ခဲ့ပြီး eToro သည် TRON ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာအဖြစ်ထွက်လာခဲ့သည်။ မင်းကော်မရှင်ကိုမပေးရဘူး၊ ပလက်ဖောင်းကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ၀ ယ်နိုင်၊ သိမ်းထားနိုင်တယ်။ သင်ဒေါ်လာ ၂၅ မှ TRON တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ပြီးသင်၏အစုစုကိုကွဲပြားစေရန်အခြားစျေးကွက်များကို ၀ ယ်နိုင်သည်။
eToro တွင် TRON ကိုရောင်းရန်သင်၏အကောင့်သို့ ၀ င်ပါ။ ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အကောင့်ကို credit ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းပါသည်။ သင်၏ဘဏ်အကောင့်ရှိရောင်းရငွေမှငွေကိုရယူလိုလျှင်ငွေထုတ်ရန်ရိုးရှင်းစွာတောင်းဆိုပါ။
TRON သည်မင်းချမ်းသာအောင်လုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းသည်ဆုံးရှုံးမှုအမြဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်လိမ့်မည်။ သင်ကိုယ်တိုင်ကူညီရန်၊ နည်းပညာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းနှင့်အစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ရွေးချယ်နိုင်သောနည်းဗျူဟာမှာဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအာကာသ၏ရှုပ်ထွေးမှုများကိုသင်သင်ယူနေစဉ်ဈေးကွက်သဘောထားကိုတိုင်းတာရန် Lear2Tradecrypto အချက်ပြများကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်။